Izindlela zokusebenza nezingane, ukwelashwa kwezobuciko
Lapho nje ingane ithatha ibhulashi, ubumba noma ubumba ukuze imodeli, ukhulula ukuqonda kwakhe. Ngenxa yalokho, ukuphulukiswa kutholakala ngokuzibonakalisa okubonakalayo kokukwazi ukudala. Ukucabangela izindlela zokusebenza nezingane, ukwelashwa kwezobuciko kungenye yezindlela eziphumelela kakhulu. Futhi, mhlawumbe, enye yezenzo zokuzilibazisa okunempilo kwezokwelapha ubuciko yizobuciko ezibukwayo. Akukhathaleki ukuthi ukudweba kuzokwenzeka kanjani ngesikhathi sokugula noma ukulungisa izinkinga zokuthuthukiswa kweminyaka. Okubaluleke nakakhulu, inqubo ngokwalo: ukukhahlela, ukuxubha, ukuxuba, ukukhetha noma ukudweba okungenangqondo ngembala - kuyoba kuhle!
Ukudweba - indlela ethandwa kakhulu kwezokwelapha
Isimo esivamile. Ingane ihlezi, iyathukuthela, izama futhi ibonisa ngokucacile lezi zihloko. Lapha kwafika ilanga, isibhakabhaka, indlu, inja, abantu, insimu noma umfana ovela egcekeni elilandelayo. Kubonakala sengathi izingane zidweba izinto ezizwakalayo, kodwa ngazo ziveza izwe labo elingaphakathi, isimo sabo sengqondo, imizwelo yabo. Yenza izingane zidwebe ngamapensela, ucezu lwephepha kanye nenkululeko ephelele! Ulindele ukutholakala kwangempela.
Sekuyisikhathi eside ukudweba kube yingxenye ehlukile kwengqondo, ngisho nangendlela yokuphilisa izingane ezivela ezifweni ezihlukahlukene. Ngempela, umbala, isimo nesethulo esithombeni lapho umntwana ekhuluma ngokucacile ukuthi akasoze athi ngokuzwakalayo. Ubuye ahlakulele ukucabanga, ukusebenzisana, ukucabanga futhi afunde ukubekezela. Futhi ngokushesha lapho uthola indlela oyithandayo, indlela elula futhi ekhululekile yokudweba, kuyoba lula kuwe ukuthi uqonde izinto eziningi ezingenasici.
Izwe lokudweba alinamkhawulo njengenganekwane yezingane, ngakho-ke akudingeki njalo ukufunda izithombe ngokoqobo. Isibonelo, amathoni amnyama namagrey - akusho ukuthi ancibilikisayo futhi angalungile. Mhlawumbe ingane ilungele futhi ifuna isicelo kulo mbala. Noma izinhlamvu zezinganekwane, amaqhawe ezithombe ezidumile, kunzima ukubona - lokhu kuyisizathu sokujabulela ukufunda komqondisi wengane. Yileyo ndlela azizwa ngayo lohlelo. Akunakwenzeka ukubeka ubuciko bezingane nganoma isiphi isikhathi esihlalweni bese uzama ukuqonda ngokoqobo. Kanye nemidwebo ngokwabo, ngokuvamile abantu abadala abakwazi ukuyiqonda ngenxa yokuntuleka kokucaca, imigqa ephathekayo kanye nemfundo abajwayele ukuyenza futhi bazama ukuphoqa. Kuphumelela kakhulu ukwenza le nqubo ithole ukwelashwa kwezobuciko kanye nethuluzi lokuphumula. Lapho ukudweba kwenzeka:
• Ukuhlukanisa imizwelo emibi nokudweba usuku olunzima noma umcimbi.
• Ukulindela nokuqiniswa kokufutheka, intukuthelo, intukuthelo. Khona-ke ungakwazi ukugwema isijeziso, amazwi okucasula nezenzo. Kungcono ukunikeza konke ephepheni, imigqa, amapende, izibalo nezinto.
• Imisebenzi ehlangene nethuba eliyingqayizivele kule nqubo, ebuza imibuzo mayelana nomdwebo ukuthola ukuthi yini ehlupha ingane. Futhi into esemqoka ukuthi ungamsiza kanjani.
• Ukubheka okuvela eceleni kanye nokuxwayisa kwangaphambili kwenkinga, kuze kufike ekhelini kuchwepheshe. Hlola ngokucophelela: unemibala, ubukhulu, ubushelelezi bomugqa, ukuphelele kwesithombe kushintshwe ngokuphawulekayo? Izinguquko ngokungazelelwe isikhathi eside sezivele zibe yingxoxo yenkulumo encane.
Ukuze ufunde futhi ufunde izinto ezintsha mayelana nengane ngokusho kwemidwebo yakhe, le nqubo idinga ukuhlelwa kahle, inentshisekelo kumculi omncane. Kusobala ukuthi iningi lezingane livuma ngokuzithandela lobu buciko. Kodwa lesi sifiso sidinga ukusekelwa ngazo zonke izindlela.
Okokuqala, njalo endaweni evelele nasemkhakheni wokubuka wengane, makabe nezinsimbi: iphepha, amapensela, amaki, amapende kanye namabhulashi.
Okwesibili, ake ingane ikhethe. Ufuna iphepha eliningi-makangithathe. Ufuna ukudweba ngesikhathi esifanayo nge ipensela nomaki - empilweni. Beka ibhulogi enkulu yokuzivikela, ihembe lokudweba - bese uhamba! Akufanele akwesabe ukutafula itafula, izindonga, izingubo. Ngakho-ke, udinga ukunakekela indawo yokudweba nezinye izinto ezincane kusengaphambili.
Okwesithathu, ungafuni ukuthenga izesekeli ezibizayo zokudweba. Into esemqoka akuyona imiqulu, kodwa ukutholakala. Ngakho-ke, kungcono ukuba nemidwebo eyengeziwe ngomsebenzi kababa kunephepha elilodwa elibizayo. Okulandelayo - i-fantasy nobubanzi bokudala, okufanele abantu abadala bakhuthazwe ngazo zonke izindlela. Yiqiniso, hhayi ngokwezindleko zemvelo.
Ikuphi ingane engathandi ukupenda iphephadonga noma ukuya ku-gouache emnyango wekhabhinethi? Futhi akuzona njalo lokhu okugubhayo. Ngokuvamile izingane ziqhutshwa yisifiso sokufunda, ukuhlola nokuhlola amakhono abo, okuyinto isikhala esidingekayo. Futhi kulula kakhulu ukudala wonke umuntu, ngisho nasekamelweni elijwayelekile. Hlanganisa, thinta, unamathisele amaphepha amakhulu ephepha, iphepha lodonga elidala noma i-newsprint. Ingane idinga izinsuku ezimbalwa ukuzama i-albhamu enjalo ngokudweba. Futhi-ke uzobe ekhawulwe eshidi elijwayelekile. Kuwo futhi isithombe sibonakala nakakhulu, kulula kakhulu ukulawula inqubo, ihlale iseduze futhi ihlangene ngokuhlangana endaweni eyodwa.
Kubalulekile ukufundisa ngokuhlakanipha futhi ngesikhathi esifanayo ugqugquzele ingane ukuba ihlele umdwebo. Kungaba ngokuphelele noma yisiphi isitayela nendlela yokwenziwa. Vumela umbonisi omncane azame ukuzitholela izithombe zangaphakathi ezivela enkumbulweni. Akekho ophazamisa ukuhlela imimoya egcwele ngesikhathi sokuhamba, uhambo oluya e-dacha noma e-escus. Incwajana encane nepensela - isithombe sibhalwe! Abantwana bangadala ukuchungechunge lonke kanye nokuqoqwa kwemidwebo, ukuqoqa okuyinto eveza incwadi enhle noma incwajana.
Futhi injabulo enkulu, injabulo nokucabangela ukuqoqa abangane nezihlobo kuphinde kubangele umbukiso wemidwebo, noma ngabe iboshelwe ngezikhonkwane emaketeni ekamelweni elikhulu! Ngakho-ke ingane ayifundi nje ukuchaza, ukwakha, nokuqonda ngokubonisana nomphakathi umbono wakhe, isitayela sesethulo nendlela yokusebenza. Angabona futhi ukuthi abantu basabele kanjani, bathathe iseluleko nokugxeka, babonge isithakazelo esibonisiwe. Uma, ekucubunguleni nasekujwayeleni nefomu elisha lobuciko, ingane ibonisa isithakazelo esijulile futhi ifuna ukufunda okwengeziwe, zama ukuthola isikole esinjalo. Khetha imodeli yokufundisa nomfundisi wokudweba, okuyiyona into eyinhloko yobuciko kanye nendlela yokuzilungiselela. Ngenhlanhla, manje kukhona izikole eziningi nezitolo zobuciko.
Ezinye izindlela zokwelapha ubuciko
Ukuphulukisa ngosizo lwezinhlobonhlobo zobuciko akukaze kwamukelwa yibo bonke abazali. Futhi yize kakhulu. Okumangalisa ukuthi uma bebhapathizwa emhlabeni wokudalwa nokudala ubuhle, izingane azijabuli ngokomzwelo kuphela, kodwa futhi zivuselela ukuvikela nokubuyisela imisebenzi yomzimba. Lena i-hormone yabo yenjabulo, insimu yomsebenzi ophethe imiphumela ebonakalayo. Ukuze uqale ukudala, ungazimela ngokuzimela noma ngemuva kokubonisana nochwepheshe ukuze unqume uhlobo lokwelapha ubuciko. Ngokujwayelekile, njengesizo ekwelapheni okujwayelekile sokuthola, kuphakanyiswa:
1. Ukudweba. Amapensela, amakaki kanye namakaki afanele izingane ezingasebenzi kahle. I-Watercolor, i-gouache, amapende ase-acrylic - ezinganeni eziye zabhekana nokucindezeleka nokucindezeleka okujulile kwengqondo.
2. Sebenza ngezindlela ezahlukene zokufanisa (ubumba, wax, plasticine) nokudweba.
3. Ubuciko bokudala izibalo ezivela ephepheni (origami, collage).
4. Umculo, ukucula, amazwi.
5. Ukudansa, ipulasitiki, ukuvocavoca kwezobuciko.
6. Ama-movie namavidiyo.
7. Ukwelashwa kwezinganekwane. Vumela ingane kuyo yonke imisebenzi yakhe yokudala, eyasiza umbono ophelele futhi omuhle wezwe. Kubo, ukhazimule, unomusa futhi unhle!
Amathiphu awusizo wokusebenzisa ukwelashwa kwezobuciko
• Njengoba bekhula, abafana abanesithakazelo esincane sokudweba, futhi kakade esikoleni banqika ukukwenza futhi kamuva emikhondweni yabo.
• Ukuphakama kwesithakazelo nesifiso sokufunda amasu ahlukahlukene okudweba kubonakala ezinganeni ezineminyaka emihlanu kuya kweyisithupha ubudala. Futhi ngenkathi eneminyaka engu-10 uhambisa kancane kancane.
• Imidwebo yamantombazane inembile kakhulu, ichazwe ngokucacile futhi ihloniphekile. Abafana bakhetha ukunyakaza, ngokuvamile iziqephu zabo zihlukumezekile futhi azisebenzi ngokugcwele.
• Kuze kube neminyaka engu-12 ubudala, awukwazi ukuphazamisa ekuthuthukiseni amandla okudala omculi osemusha. Khombisa ngobumnene kuphela. Leli phuzu liye laqaphela kakade amakhosi amaningi emhlabeni wezobuciko.
• Umdwebo onethalenta awuyona isithombe noma ikhophi yezwe elizungeze, kodwa isithombe sombono weqiniso ngezinto zezingane.
• Ukudweba, ngokwezengqondo zengqondo, kuvumelana ngokuvumelana nobuntu babo ngisho nabalandeli bezesayensi yemvelo. Ukuzilibazisa okunjalo kusiza kangcono ukuqonda hhayi kuphela ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe, kodwa futhi kuyashukumisela ekufakweni kwemishini yobunjiniyela.
• Izifundo zokuqala zekhono lokufanisa ingane zinganikezwa endlini yokugezela. Lapho futhi kuyo yonke indawo kuyoba lula ukugeza. Mane ukhumbule ukuthi awukwazi ukumshiya wedwa endaweni elula futhi usakaze kangcono amasethi amancane.
• Ukufundisa ingane ngendlela elula yokudweba iminwe, izintende noma ibhulashini - ingaba sezinyanga ezingu-7. Kancane kancane fundisa ingane yakho imithetho eyenza le nqubo ikhululeke futhi ijabulise. Uma ingane ingafuni ukudweba, okokuqala mbonise ukuthi yenziwe kanjani. Khona-ke uzoqonda futhi aqonde ukuthi imibala ayadingeki ukuba iphoqe, kodwa ibhizinisi elithakazelisayo.
• Iphalethi, ibhulashi, ingilazi engeyona ingilazi, i-albhamu yokudweba akuzona zonke izinto zokudweba. Usengasebenzisa uphawu lwesitembu, imidwebo eyenziwe ngokwenza noma isiponji esivamile se-foam.
• Ukuthuthukiswa kobuciko obuhle bezingane kuhamba ngezigaba: ubuchwepheshe bombhalo, umdwebo wokushayela nokuxuba imibala, umbala, imidwebo yezakhiwo kanye nenkululeko yokudala.
Lapho ukhetha indlela yokusebenza nezingane, ukwelashwa kwezobuciko kuyindlela engcono kakhulu yokusizwa kwengqondo.
Inkulumo yengane ngonyaka wesithathu wokuphila
Amafomu nezindlela zemfundo emndenini
Ubudala bezingane lapho abazali abangahamba khona nabo
Kulula kangakanani ukufundisa ingane ukuthi ingabala kanjani
Iphi iphunga nama-aromas athokoza amadoda
Indima yokudla okunomsoco ekuthuthukiseni izingane
Ukunakekela ubuso nobuso
Ukulimaza ugwayi nokuphuza utshwala empilweni yabantwana
Ipulazi izokufika kahle, noma izinto ezingu-7 ezenza kube lula ukuphila
Belyashi ngenyama yabantu abavilaphayo
Ungagcina kanjani isibalo sakho esincane emva kokubeletha?
Isaladi nge anyanisi noshizi oluhlaza okwesibhakabhaka
Ingabe kufanele ngihalalisele isoka langaphambili ngosuku lwakhe lokuzalwa?
I-Horoscope ngo-December 2017 - iSagittarius yowesifazane - evela eTamara Globa no-Angela Pearl
Ungaphazamisi ubuhlobo nendodana yakhe ngenxa yomyeni wakhe omusha
Indlela yokuyeka ukubeletha ngokushesha
Babaganusz isitshalo seqanda